ထီ Archives - The Moon MM
၂၁ကြိမ်မြောက် သိန်း ၅၀၀၀ဆုကို ရွှေဘိုမြို့နယ် ဆိပ်ခွန်ရွာ ကိုနေတိုးလှိုင် မှ ဆွတ်ခူးရရှိ…
November 1, 2020 by Wai Lu
၂၁ကြိမ်မြောက် သိန်း ၅၀၀၀ဆုကို အပိုင်သေချာတဲ့ မန္တလေး ခိုင်ရွှေဝါ ထီဆိုင်ကြီး မှ ရွှေဘိုမြို့နယ် ဆိပ်ခွန်ရွာ. ကိုနေတိုးလှိုင် မှဆွတ်ခူးရရှိသွားပါတယ်။ credit-khaing Shwe War lottery Shop ZAWGYI ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း ၅၀၀၀ဆုကို ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ခြန္႐ြာ ကိုေနတိုးလႈိင္ မွ ဆြတ္ခူးရရိွ… ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း ၅၀၀၀ဆုကို အပိုင္ေသခ်ာတဲ့ မႏၲေလး ခိုင္ေ႐ႊဝါ ထီဆိုင္ႀကီး မွ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ခြန္႐ြာ. ကိုေနတိုးလႈိင္ မွဆြတ္ခူးရရိွသြားပါတယ္။ credit-khaing Shwe War lottery Shop
၂၁ကြိမ်မြောက် ယ၅၃၉၃၅၄ နံပါတ်ဖြစ် သိန်းတစ်သောင်းဆုကို ပခုက္ကူမြို့ခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင် ပိုင်ရှင် ဦးကျော်နိုင်က ရောင်းမကုန်သည့် ထီလက်ကျန်မှ သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး ဆွတ်ခူးရရှိသွားပါတယ်။ credit-Khaing Shwe War Lottery Shop ZAWGYI ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုကံထူးရွင္ ၂၁ႀကိမ္ေျမာက္ ယ၅၃၉၃၅၄ နံပါတ္ျဖစ္ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုကို ပခုကၠဴၿမိဳ႕ခိုင္ေ႐ႊဝါထီဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ေရာင္းမကုန္သည့္ ထီလက္က်န္မွ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါတယ္။
November 1, 2020 November 1, 2020 by Wai Lu
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဌ ၁၁၁၉၃၇(ခိုင်ရွှေဝါ) သိန်းတစ်သောင်း ယ ၅၃၉၃၅၄ သိန်းငါးထောင် ဝ ၃၇၅၆၀၁ ကဂ ၉၀၄၉၇၀ သိန်း၂၀၀၀ဆု ဓ ၆၇၄၆၈၉ ဂ ၃၉၃၂၀၃ အ ၁၀၁၄၃၆ သိန်း၁၀၀၀ဆု အ ၁၃၀၈၂၁ ကခ ၅၂၂၁၅၂ ဒ ၇၁၅၀၆၆ သ ၇၅၈၅၂၂ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု ဇ ၅၃၄၉၆ ကင ၂၂၅၄၁ ဃ ၃၈၅၆၈ ယ ၃၁၂၂၂ ကဃ ၉၇၃၅၄ ဟ ၂၁၄၆၉ ယ ၅၆၅၂၅ ဟ ၂၁၄၆၉ ဠ ၁၁၅၅၆ သ ၇၄၀၉၇ ထ ၃၄၈၂၆ ကဂ ၄၄၉၅၃ ဒ … Read more
October 1, 2020 by Wai Lu
ယခုလ အကြိမ်(၂၀)မြောက်သိန်း၁သောင်းဆုကို ရ ၉၅၈၈၂၇ နံပါတ်ဖြစ် တောင်ကြီးမြို့မှ ကိုစစ်သီဟဟိန်း ဆွတ်ခူးရရှိသည်ဟုသိရ.. Credit သာ့သနာအားမာန်ဆရာတော် ZAWGYI (၂၀)ၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ သိန္း၁ေသာင္းဆုကံထူးရွင္.. ယခုလ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္သိန္း၁ေသာင္းဆုကို ရ ၉၅၈၈၂၇ နံပါတ္ျဖစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ့မွ ကိုစစ္သီဟဟိန္း ဆြတ္ခူးရရိွသည္ဟုသိရ..
(၂၀)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေ သိန်း၁၅၀၀၀ ကံထူးရှင် ..
(၂၀)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ လ-914237 နံပါတ်ဖြစ် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆုကို ဧရာဝတီတိုင်း‌ဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့တွင်နေထိုင်သူ ဦးတင်မောင်ညွန့်က ဆွတ်ခူးရရှိ… credit – Khaing Shwe War Lottery Shop ZAWGYI (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ သိန္း၁၅၀၀၀ ကံထူးရွင္ .. (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲမွ လ-914237 နံပါတ္ျဖစ္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆုကို ဧရာ၀တီတိုင္း‌ေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ ဦးတင္ေမာင္ၫြန႔္က ဆြတ္ခူးရရွိ…
(၂၀)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး တိုက်ရန်…
October 1, 2020 October 1, 2020 by Wai Lu
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု လ-914237 ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆု ရ-958827 (၂၀)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆု ဓ-508592 အ-929992 ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆု ဓ-592088 ဂ-734561 က-453044 ည-418446 ကခ-940578 ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆု ကဂ-154755 ဘ-353057 ဓ-762988 ဇ-709559 ဓ-622654 ကဂ-215474 ဟ-923267 (၂၀)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်းငါးရာဆု ထ-210043 ကဃ-736743 ဓ-788858 ဘ-463663 ကဆ-281159 အ-561106 ဝ-267313 ကစ-387299 ဘ-150671 ဋ-576649 န-260189 တ-255934 ကဂ-324895 ကဃ-365424 က-727542 ဇ-614775 ဇ-326807 အ-646171 င-734521 ကဆ-243811 ဍ-122706 န-955774 ဏ-663570 ယ-534423 (၂၀)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်းနှစ်ရာဆု ဍ-629678 က-697061 င-107682 င-758339 ပ-834289 စ-152807 ဂ-231269 … Read more
(၂၀)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီပေါက်စဉ်
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု လ-914237 ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆု ရ-958827 (၂၀)ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆု ဓ-508592 အ-929992 ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆု ဓ-592088 ဂ-734561 က-453044 ည-418446 ကခ-940578 ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆု ကဂ-154755 ဘ-353057 ဓ-762988 ဇ-709559 ဓ-622654 ကဂ-215474 ဟ-923267 ကျန်ဆုမဲများဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် credit-Khaing Shwe War Lottery Shop ZAWGYI (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထိီေပါက္စဥ္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆု လ-914237 က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆု ရ-958827 (၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင္႕ပြဲမွ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ဆု ဓ-508592 အ-929992 က်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆု ဓ-592088 ဂ-734561 က-453044 ည-418446 ကခ-940578 က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ဆု ကဂ-154755 ဘ-353057 ဓ-762988 ဇ-709559 ဓ-622654 ကဂ-215474 ဟ-923267 က်န္ဆုမဲမ်ားဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
(၁၉)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် မယမင်းစံတို့မိသားစု
September 1, 2020 by Wai Lu
လိုင်း(၁) အခန်း(၁) သရက်မြိုင်ရဲရိပ်သာ၊စွယ်တော်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့မှ မယမင်းစံသည် (၁၉)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲကိုဆုခူးရရှိခဲ့ပါသည်။ Photo-cele zone ZAWGYI (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းခြဲ ကံထူးရွင္ မယမင္းစံတို့မိသားစု လိုင္း(၁) အခန္း(၁) သရက္ၿမိဳင္ရဲရိပ္သာ၊စြယ္ေတာ္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မယမင္းစံသည္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲကိုဆုခူးရရွိခဲ့ပါသည္။
(၁၉) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ ကျပ်သိန်း(၁၅၀၀၀) ကံထူးရှင်
(၉)ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင် ဆုကြီးကို ရွှေမြန်မာထီဆိုင်ကြီးမှ စံချိန်တင် ထပ်မံဆွတ်ခူးပေးခဲ့ပါတယ်။ ပ – ၃၀၇၆၆၆ ကံထူးရှင်ကတော့ ဒေါ်ယမင်းစံ လိုင်း(ခ)၊ အခန်း(၁)၊ သရက်မြိုင်ရဲရိပ်သာ၊စွယ်တော်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်တယ်။ Source-Khaing Shwe War Lottery Shop ZAWGYI (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီ က်ပ္သိန္း(၁၅၀၀၀) ကံထူးရွင္ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ ဆုႀကီးကို ေရႊျမန္မာထီဆိုင္ၾကီးမွ စံခ်ိန္တင္ ထပ္မံဆြတ္ခူးေပးခဲ႔ပါတယ္။ ပ – ၃၀၇၆၆၆ ကံထူးရွင္ကေတာ့ ေဒၚယမင္းစံ လိုင္း(ခ)၊ အခန္း(၁)၊ သရက္ၿမိဳင္ရဲရိပ္သာ၊စြယ္ေတာ္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ျဖစ္တယ္။
( ၁၉ )ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး…
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု ပ-307666 ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆု သ-828709 ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆု ဋ-657551 စ-911973 ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆု ဓ-284906 ဘ-750893 ပ-100887 ကဂ-926789 ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆု ဟ-508884 ယ-653472 ဆ-451508 ဂ-798138 ဖ-475733 ဋ-685835 (၁၉) ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆု ရ-502270 ဌ-559616 န-763403 ဆ-412908 ဃ-105352 တ-758781 စ-216698 လ-648891 ဆ-625589 ဂ-663396 ယ-474896 ဌ-264426 သ-533102 ဏ-245115 ဠ-257126 တ-178558 အ-941880 ဗ-348254 သ-603860 ဗ-575885 ကက-243889 ကခ-951721 အ-383687 ကဃ-239780 ၤရ-449226 ဏ-990812 (၁၉)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆု ဋ-919746 … Read more